INPVC ithengisiwe ukususela ngo-2020 ye-PVC (Polyvinyl Chloride) evela kwi-HAOYUAN PVC PLASTIC. Ibandakanya usapho olukhulu lweekhompawundi ekulungele ukusetyenziswa kuzo zombini iigrafu ezenziwe ngoplastiki kunye nezingqingqwa eziyilelwe ngokukodwa zaza zalungiselelwa izicelo ezahlukeneyo. I-INPVC ivelisa iikhompawundi eziqhelekileyo okanye ivelise iikhompawundi ezenziwe ngokwezifiso kwiimfuno, ngokubanzi ukusuka kwintambo kunye nentambo, umbane kunye ne-elektroniki, ukwakha kunye nolwakhiwo kumashishini ezithuthi kunye nonyango.
Siphambili kwitekhnoloji yokulungisa i-PVC, ibandakanya ngaphezulu kwe-27years yokugqwesa kwemveliso kuluhlu olubanzi lweemveliso. Iindawo zethu eziqinisekisiweyo ze-ISO-9001 zijolise kukhuseleko, umgangatho kunye nokuzenzekelayo okunika ezona ndlela zichanekileyo kunye nokulungiswa, kuzo zombini iifom zomgubo kunye neefom.
Okubaluleke ngakumbi, siqhubeka ngokuqhubeka nokuphucula izixhobo ze-eco-friendly ukuphucula ukuzinza. Zonke iimveliso zethu zenziwe ngenkqubo elungiselelwe ukulandela umgangatho, impilo kunye nokhuseleko. Umthungi wenza iikhompawundi kunye nezongezo zivunyiwe ngeRoHs, REACH kunye nesatifikethi se-FDA.
Ngokugxila kwizinto ezintsha kunye ne-R & D, i-INPVC ikulungele ukuhlangabezana neemfuno ezihlala zitshintsha kwindawo yentengiso yehlabathi. Iziko lethu lophuhliso lobuchwephesha lisivumela ukuba siphuhlise izisombululo ezenziwe ngokwezifiso ezixhomekeke kuhlobo lwesicelo, iinkqubo kunye neempawu zoomatshini bomthengi wethu we-PVC.
Iigranules eziveliswe kwisebe lolawulo lomgangatho, ziyavavanywa kwilabhoratri yolawulo lomgangatho, exhotyiswe ngobukhuni bokuvavanya, umatshini oshushu wokushicilela, umvavanyi wobulukhuni, isibali sokubala sepolymer, i-extruder yaselebhu, njl.njl. iinxalenye, iithumbu elirhabaxa, inaliti yenaliti, igranules yococeko kunye nezinye, izinto ezisetyenziswayo ziveliswa, ngokwemigangatho yosuku lwehlabathi, kwaye zinikezelwa kubathengi abahlonitshwayo.
Sizimisele ukuzisa izisombululo zokuphucula iinkqubo, ukunciphisa iindleko kunye nokuphucula iipropathi zeemveliso zePVC zabathengi bethu. Injongo yethu kukwakha intsebenziswano kunye nentsebenziswano esondeleyo nabathengi bethu. Kwaye wonke umthengi uya kuxhamla kulwazi lwethu, amava ethu exesha elide kunye nenkonzo yethu.
Amava eeMveliso zaMinyaka engama-27
Olona Line lubanzi lwePvc
Ilungu loMbutho woShishino lweePlastikhi zaseChina
Umboneleli oSombulula isisombululo se-PVC
Umnini weNkqubo ye-ISO 9001 yoLawulo lwe-ISO9001
Ilebhu yoBuchule enezixhobo ezingama-65
I-R & D kunye neQela lobuGcisa elinamava aphakathi kwama-20years
I-100% yezinto ezinyulu 100%
I-Eco-friendly ne-REACH, isatifikethi seRoHS
Iinketho ezahlukeneyo zokupakisha
Zombini eziQinisekayo kunye neeSoftware zePVC eziFumanekayo
Zombini iiPowder kunye neFom Compound ziyafumaneka
Uvavanyo lweSampulu yasimahla
IiNkonzo zasimahla zoNxibelelwano ngezoBugcisa
Inkonzo ye-intanethi ye-24
Inkonzo efanelekileyo yokusebenza
Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza
Imiqathango yokuhlawula eguqukayo
Inkonzo ephawulekayo emva kokuthengisa
Iqela le-NPVC, Omnye wabavelisi abaphambili base China kunye nabathumela imveliso yabo kwizithako kunye neezongezo zePlastiki yePlvinyl Chloride (PVC), banamashishini amathathu.
Yasekwa ngonyaka we-1993, yenza i-100% yeentombi eziqinileyo nezingaguqukiyo ze-PVC kwizicelo ezininzi zisebenzisa inaliti, i-extrusion kunye neendlela zokuqhubekeka zomoya.
2.Zhentai Izinto Ezintsha Co., Ltd.
Yasekwa ngo-2002, kwaye ivelisa kwaye ithengise izisombululo zezongezo ezinobungcali ezibonelela ngokusebenza ngokugqwesileyo kwezobuchwephesha kumzi-mveliso weplastikhi wePVC.
3.Luxfore Imp. & Exp. Co., Ltd ..
Yasekwa ngo-2010, ukungenisa uphawu lophawu lwe-PVC olusetyenziswayo kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe kumgangatho wePVC kunye nezongezo kwihlabathi liphela